 यस संसारका धनीहरूलाई घमण्‍डी नहुने आज्ञा देऊ, र अनिश्‍चित सम्‍पत्तिमा होइन तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्‍तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्‍वरमाथि तिनीहरूले आशा राखून्‌। तिनीहरूले असल कार्य गरून्, र असल कामहरूमा धनी, उदार-चित्त र दानी होऊन्‌। यसरी आफ्‍नै लागि भविष्‍यको असल जग बसाल्‍न सकून्, ताकि तिनीहरूले त्‍यो जीवन पक्रिराखून्‌ जो साँच्‍ची नै जीवन हो।
 येशू यरीहोमा प्रवेश गरेर त्‍यहाँबाट जाँदैहुनुहुन्‍थ्‍यो। त्‍यहाँ जखायस नाउँ भएका एक जना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए, अनि धनी थिए। येशू को हुनुहुँदोरहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्‍थे, तर पुड़को भएका हुनाले भीड़ले गर्दा तिनले देख्‍न सकेनन्‌। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अगिअगि दौड़ेर एउटा अञ्‍जीरको रूखमा चढ़े। किनकि येशू त्‍यही बाटो भएर जान लाग्‍नुभएको थियो। जब येशू त्‍यस ठाउँमा आइपुग्‍नुभयो, तब उहाँले मास्‍तिर हेरेर तिनलाई भन्‍नुभयो, “ए जखायस, चाँड़ो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्‍नुपरेको छ।” तिनी झट्टै ओर्लेर आए। अनि खुसीसाथ उहाँको सत्‍कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, “उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्‍न गए।” जखायसले खड़ा भएर प्रभुलाई भने, “प्रभु, हेर्नुहोस्, म आफ्‍ना सम्‍पत्तिको आधा भाग गरीबहरूलाई दिन्‍छु, र कोहीबाट अन्‍यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्‍यसको चार गुणा फिर्ता गरिदिनेछु।” तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहामका छोरा हुन्‌। किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्‍न र बचाउन आएको हो।”
तर यस संसारको फिक्री र धनको मोह र अरू थोकको लालच आएर वचनलाई निसासिदिन्‍छन्‌। ती फलवन्‍त हुँदैनन्‌।
 कोही एक जना शासकले येशूलाई यसो भनेर सोधे, “हे असल गुरु, अनन्‍त जीवन पाउनलाई म के गरूँ?” येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमी मलाई किन असल भन्‍दछौ? एक परमेश्‍वरबाहेक कोही असल छैन। तिमी आज्ञाहरू त जान्‍दछौ: ‘व्‍यभिचार नगर्नू, हत्‍या नगर्नू, नचोर्नू, झूटा गवाही नदिनू, आफ्‍ना बुबा र आमाको आदर गर्नू’।” तिनले भने, “यी सब त मैले मेरो युवावस्‍थादेखि नै पालन गरेको छु।” यो सुनेपछि येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ। तिमीसँग भएका जे जति छन्‌ ती सबै बेचेर गरीबहरूलाई बाँड़िदेऊ, र तिमीलाई स्‍वर्गमा धन हुनेछ, र आऊ, र मेरो पछि लाग।” तर यी कुरा सुनेर ती शासक अति उदास भए, किनभने तिनी अत्‍यन्‍त धनी थिए। अनि येशूले तिनलाई हेरेर भन्‍नुभयो, “धन-सम्‍पत्ति हुनेहरूलाई परमेश्‍वरको राज्‍यभित्र प्रवेश गर्नु अति गाह्रो छ, किनभने धनी मानिसलाई परमेश्‍वरको राज्‍यमा प्रवेश गर्नुभन्‍दा त ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुन्‍छ।” अनि सुन्‍नेहरूले भने, “तब कसको उद्धार हुन सक्‍छ त?” उहाँले भन्‍नुभयो, “मानिसहरूका लागि जे असम्‍भव छ, त्‍यो परमेश्‍वरको लागि सम्‍भव छ।” तब पत्रुसले भने, “हेर्नुहोस्, आफ्‍नो घरद्वार छोड़ेर हामी तपाईंको पछि लागेका छौं।” तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, जसले घर वा पत्‍नी, वा दाजुभाइ वा आमा-बुबा, अथवा छोराछोरीलाई परमेश्‍वरका राज्‍यको निम्‍ति त्‍याग्‍छ, त्‍यसले यसै समयमा धेरै बढ़ी प्रतिफल पाउनेछ र आउने युगमा अनन्‍त जीवन प्राप्‍त गर्नेछ।”
“म धनी छु, र मसित धन-सम्‍पत्ति छ, र मलाई केही कुराको खाँचो छैन” भनी तिमी भन्‍दछौ, तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दु:खी, दयनीय, दरिद्र, अन्‍धा र नाङ्गा छौ।
 येशूले आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “कुनै धनी मानिसको एक जना व्‍यवस्‍थापक थियो। त्‍यसले आफ्‍नो मालिकको धन-सम्‍पत्ति उड़ाइरहेको छ भन्‍ने अभियोग त्‍यसको विरुद्धमा लागेको थियो। तब मालिकले त्‍यसलाई बोलाएर भन्‍यो, ‘तेरो विषयमा म जे सुन्‍दैछु त्‍यो के हो? व्‍यवस्‍थापकको तेरो कामको हिसाब मलाई दे। अब उप्रान्‍त तँ व्‍यवस्‍थापक रहनेछैनस्‌।’ “तब व्‍यवस्‍थापकले आफ्‍नो मनमनै भन्‍यो, ‘अब म के गरूँ, किनकि मेरा मालिकले मबाट व्‍यवस्‍थापकको काम खोस्‍न लागेका छन्‌। खनजोत गर्ने मेरो ताकत छैन, भीख माग्‍न मलाई लाज लाग्‍छ।
 आफ्‍ना चेलाहरूलाई आफूकहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, भेटीपात्रमा चढ़ाउनेहरूमध्‍ये यस गरीब विधवाले सबैभन्‍दा बढ़ी चढ़ाई। किनभने सबैले आफ्‍नो-आफ्‍नो प्रशस्‍तताबाट चढ़ाए, तर यस स्‍त्रीले चाहिँ आफ्‍नो दरिद्रताबाट आफ्‍नो सारा जीविका नै अर्पण गरी।”
 येशू यरीहोमा प्रवेश गरेर त्‍यहाँबाट जाँदैहुनुहुन्‍थ्‍यो। त्‍यहाँ जखायस नाउँ भएका एक जना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए, अनि धनी थिए। येशू को हुनुहुँदोरहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्‍थे, तर पुड़को भएका हुनाले भीड़ले गर्दा तिनले देख्‍न सकेनन्‌। तिनी उहाँलाई हेर्नलाई अगिअगि दौड़ेर एउटा अञ्‍जीरको रूखमा चढ़े। किनकि येशू त्‍यही बाटो भएर जान लाग्‍नुभएको थियो। जब येशू त्‍यस ठाउँमा आइपुग्‍नुभयो, तब उहाँले मास्‍तिर हेरेर तिनलाई भन्‍नुभयो, “ए जखायस, चाँड़ो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्‍नुपरेको छ।” तिनी झट्टै ओर्लेर आए। अनि खुसीसाथ उहाँको सत्‍कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे, तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, “उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्‍न गए।” जखायसले खड़ा भएर प्रभुलाई भने, “प्रभु, हेर्नुहोस्, म आफ्‍ना सम्‍पत्तिको आधा भाग गरीबहरूलाई दिन्‍छु, र कोहीबाट अन्‍यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्‍यसको चार गुणा फिर्ता गरिदिनेछु।” तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहामका छोरा हुन्‌। किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्‍न र बचाउन आएको हो।” तिनीहरूले यी कुरा सुन्‍दैगर्दा उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्‍टान्‍त भन्‍न लाग्‍नुभयो। उहाँ यरूशलेमको नजिकै हुनुहुन्‍थ्‍यो, अनि मानिसहरूले परमेश्‍वरको राज्‍य तुरुन्‍तै प्रकट हुन लागेको छ भन्‍ने सम्‍झेका थिए। उहाँले भन्‍नुभयो, “एक जना खानदानी मानिस एउटा राज्‍य प्राप्‍त गरी फर्किआउन भनी कुनै टाढ़ा देशमा गए। तिनले आफ्‍ना दश जना नोकरहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई दश सुनका सिक्‍का दिएर भने, ‘जबसम्‍म म फर्किआउँदिनँ यसबाट व्‍यापार गर।’ “तर तिनका प्रजाहरू तिनलाई घृणा गर्थे, र तिनीहरूले तिनको पछिपछि यसो भनेर दूतहरूलाई पठाए, ‘तिनले हामीमाथि राज गरेका हामी चाहँदैनौं।’ “तब राज्‍य अधिकार पाई तिनी फर्केपछि आफूले पैसा दिएका नोकरहरूलाई आफूकहाँ बोलाउने हुकुम दिए, अनि व्‍यापारबाट तिनीहरूले कति नाफा गरे भन्‍ने तिनले जान्‍न चाहे। “तब पहिलो आएर यसो भन्‍यो, ‘मालिक, तपाईंको सिक्‍काले अझै दश सिक्‍का कमाएको छु।’ “तिनले त्‍यसलाई भने, ‘स्‍याबास असल नोकर, तँ अति थोरैमा विश्‍वासी भइस्, तैंले दश सहरहरूमाथि अधिकार पाउनेछस्‌।’ “दोस्रो आएर यसो भन्‍यो, ‘मालिक, तपाईंको सिक्‍काले अरू पाँच सिक्‍का कमाएको छु।’ “तिनले त्‍यसलाई भने, ‘तैंले पनि पाँच सहरमाथि अधिकार पाउनेछस्‌।’ “अर्को आएर यसो भन्‍यो, ‘मालिक, हेर्नुहोस्, तपाईंको सिक्‍का यहाँ छ। यो मैले रूमालमा बाँधेर राखेको थिएँ। म तपाईंसँग डराएँ, किनकि तपाईं कठोर मानिस हुनुहुन्‍छ। जे राख्‍नुभएन त्‍यो लिनुहुन्‍छ, र जे छर्नुभएन त्‍यसैको कटनी गर्नुहुन्‍छ।’ “तिनले त्‍यसलाई भने, ‘तेरै मुखको कुराबाट म तेरो इन्‍साफ गर्नेछु, ए दुष्‍ट नोकर! जे राखिनँ त्‍यो लिने, र जे छरिनँ त्‍यसको कटनी गर्ने म कठोर मानिस हुँ भनेर तैंले जानेकै थिइस्‌। तब मेरो सिक्‍का बैङ्कमा किन राखिनस्‌ त? म आएर व्‍याजसहित त्‍यो पाउनेथिएँ।’ “तब नजिक उभिनेहरूलाई तिनले भने, ‘त्‍यसबाट त्‍यो सिक्‍का लिएर दश सिक्‍का हुनेलाई दिइहाल्‌।’ तिनीहरूले तिनलाई भने, ‘हजूर, त्‍यससँग त दश सिक्‍का छँदैछन्‌।’ “‘म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, जससँग छ त्‍यसलाई अझ बढ़ी दिइनेछ, तर जससँग छैन त्‍यससँग भएको पनि त्‍यसबाट खोसिनेछ। तर मैले तिनीहरूमाथि राज गरेको नचाहने मेरा ती शत्रुहरूलाई यहाँ ल्‍याओ, र तिनीहरूलाई मेरै सामुन्‍ने मार’।”
 यो सुनेपछि येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमीलाई अझ एक कुराको अभाव छ। तिमीसँग भएका जे जति छन्‌ ती सबै बेचेर गरीबहरूलाई बाँड़िदेऊ, र तिमीलाई स्‍वर्गमा धन हुनेछ, र आऊ, र मेरो पछि लाग।” तर यी कुरा सुनेर ती शासक अति उदास भए, किनभने तिनी अत्‍यन्‍त धनी थिए।
 अनि उहाँ मन्‍दिरको भेटी चढ़ाउने ठाउँको सामुन्‍ने बस्‍नुभयो, र भीड़ले भेटीपात्रमा भेटी चढ़ाएको हेर्नुभयो। धेरै धनी मानिसहरूले ठूला-ठूला रकम चढ़ाए। अनि एउटी गरीब विधवाले आएर तामाका दुई सिक्‍का, अर्थात्‌ एक पैसा चढ़ाई। आफ्‍ना चेलाहरूलाई आफूकहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, भेटीपात्रमा चढ़ाउनेहरूमध्‍ये यस गरीब विधवाले सबैभन्‍दा बढ़ी चढ़ाई। किनभने सबैले आफ्‍नो-आफ्‍नो प्रशस्‍तताबाट चढ़ाए, तर यस स्‍त्रीले चाहिँ आफ्‍नो दरिद्रताबाट आफ्‍नो सारा जीविका नै अर्पण गरी।”
 “किनकि योचाहिँ कुनै मानिसजस्‍तो हो, जसले परदेश जाँदा आफ्‍ना नोकरहरूलाई बोलाई आफ्‍नो धन-सम्‍पत्ति तिनीहरूलाई जिम्‍मा दिए। तिनले हरेकलाई तिनीहरूका आ-आफ्‍नो योग्‍यताअनुसार एउटालाई पाँच सुनका सिक्‍का, अर्कोलाई दुई र अर्कोलाई एक दिएर तिनी गइहाले। तब पाँच सुनका सिक्‍का पाउनेले तुरुन्‍तै गएर त्‍यो व्‍यापारमा लगाईकन अरू पाँच सिक्‍का कमायो। त्‍यसरी नै दुई सिक्‍का पाउनेले पनि अरू दुई कमायो। तर एक सिक्‍का पाउनेले चाहिँ गएर भूइँ खनेर आफ्‍ना मालिकको धन लुकाइराख्‍यो। “धेरै दिनपछि ती नोकरहरूका मालिक आए, र तिनले तिनीहरूसँग हिसाब मागे। तब पाँच सुनका सिक्‍का पाउने नोकरले अरू पाँच सिक्‍का ल्‍याई अगाडि आएर यसो भन्‍यो, ‘हजूर, तपाईंले मलाई पाँच सिक्‍काको जिम्‍मा दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले अरू पाँच सिक्‍का कमाएको छु।’ “मालिकले त्‍यसलाई भने, ‘स्‍याबास, असल र विश्‍वासी नोकर! तँ थोरै कुरामा विश्‍वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्‍मा दिनेछु। तँ आफ्‍ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो।’ “दुई सिक्‍का पाउनेले पनि आएर भन्‍यो, ‘हजूर, तपाईंले मलाई दुई सिक्‍का दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले अरू दुई सिक्‍का कमाएको छु।’ “त्‍यसका मालिकले त्‍यसलाई भने, ‘स्‍याबास, असल र विश्‍वासी नोकर, तँ थोरै कुरामा विश्‍वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्‍मा दिनेछु। तँ आफ्‍ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो।’ “एक सुनको सिक्‍का पाउनेले पनि आएर भन्‍यो, ‘हजूर, नरोपेको जग्‍गाबाट कटनी गर्ने र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्‍ने तपाईं कठोर मानिस हुनुहुन्‍छ भन्‍ने मलाई थाहा थियो। यसैले मलाई डर लाग्‍यो, र गएर तपाईंको सिक्‍का मैले माटोमुनि लुकाइराखें। हेर्नुहोस्, यो तपाईंको सिक्‍का लिनुहोस्‌।’ “त्‍यसका मालिकले त्‍यसलाई जवाफ दिए, ‘ए दुष्‍ट, अल्‍छे नोकर, नरोपेको ठाउँमा कटनी गर्छु, र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्‍छु भनेर तैंले जानेको थिइस्‌ भने, तैंले मेरो धन साहूकहाँ राख्‍नुपर्नेथियो, र आएर मैले मेरो धन ब्‍याजसमेत फिर्ता पाउनेथिएँ। यसकारण त्‍यसबाट यो सिक्‍का खोस, र जससँग दश सिक्‍का छ त्‍यसलाई देओ। किनभने जससँग छ त्‍यसलाई अरू दिइनेछ, र त्‍यससँग प्रशस्‍त हुनेछ। तर जससँग छैन त्‍यससँग भएको पनि त्‍यसबाट खोसिनेछ। त्‍यस बेकम्‍मा नोकरलाई चाहिँ बाहिरी अन्‍धकारमा फालिदेओ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन्‌ र दाह्रा किट्‌नेछन्‌।’
काँढ़ाहरूमा छरिएको चाहिँ त्‍यो हो, जसले वचन सुन्‍छ, तर यस संसारको फिक्री र धन-सम्‍पत्तिको छलले वचनलाई बाधा दिन्‍छ, र त्‍यो फल नदिने हुन्‍छ।
असल मानिसले आफ्‍ना नाति-नातिनाहरूका निम्‍ति पैतृक-सम्‍पत्ति छोडिराख्‍छ, तर पापीहरूको धन धर्मीहरूका लागि थुपारिन्‍छ।
 आफ्‍नो धन-सम्‍पत्ति र आफ्‍ना सबै उब्‍जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर, तब तेरा ढुकुटीहरू पोखुन्‍जेल भरिनेछन्, र तेरा भाँड़ाहरू नयाँ मद्यले चुलिएर पोखिनेछन्‌।
अल्‍छे हातहरूले मानिसलाई कङ्गाल तुल्‍याउँछन्, तर लगनशील हातहरूले सम्‍पत्ति आर्जन गर्छन्‌।
धनीको सम्‍पत्ति नै तिनीहरूको लागि किल्‍लाबन्‍दी गरिएको सहर हो, तिनीहरू यसलाई चढ्‌नै नसकिने पर्खाल ठान्‍छन्‌।
एफ्राइमले यस कुराको घमण्‍ड गर्छ, “म असाध्‍य धनी छु, म धनाढ्य भएको छु। मेरा सारा धन-सम्‍पत्तिले गर्दा तिनीहरूले ममा कुनै अधर्म पाउनेछैनन्‌।”
यहूदाले पनि यरूशलेममा लड़ाइँ गर्नेछ। सबै वरिपरिका जातिहरूको धन-सम्‍पत्ति जम्‍मा गरिनेछ— सुन, चाँदी, लुगाफाटाहरू ठूलो परिणाममा बटुलिनेछ।
यसबाहेक जब परमेश्‍वरले कुनै मानिसलाई धन-सम्‍पत्ति र जग्‍गाजमिन, र ती उपभोग गर्ने मौका दिनुहुन्‍छ, र त्‍यसलाई आफ्‍नो भाग ग्रहण गर्न र आफ्‍नो काममा खुशी रहन दिनुहुन्‍छ— यो परमेश्‍वरको वरदान हो।
परमेश्‍वरले कुनै मानिसलाई धन-सम्‍पत्ति, जग्‍गाजमिन र मान दिनुहुन्‍छ, जसले गर्दा त्‍यसलाई मन लागेको कुनै कुराको अभाव हुँदैन। तर परमेश्‍वरले त्‍यसलाई ती उपभोग गर्न नदिएर एउटा अर्कै मानिसलाई उपभोग गर्न दिनुहुन्‍छ। यो व्‍यर्थ र दु:खदायी खराबी हो।
तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरलाई सम्‍झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन-सम्‍पत्ति प्राप्‍त गर्ने शक्ति दिनुहुन्‍छ। यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खाहरूसित बाँध्‍नुभएको करार स्‍थिर गर्नुहुन्‍छ, जो आजसम्‍म छँदैछ।
परमप्रभुको आशिष्‌ले धन-सम्‍पत्ति ल्‍याउँछ, अनि उहाँले त्‍यसमाथि दु:ख थप्‍नुहुन्‍न।
 धेरै दुष्‍टहरूका सम्‍पत्तिको प्रचुरताभन्‍दा धर्मी जनहरूसँग भएको थोरै कुरो उत्तम हो। किनकि दुष्‍टहरूका पाखुरा भाँचिनेछन्‌, तर धर्मीहरूलाई परमप्रभुले थामिराख्‍नुहुन्‍छ।
 होहल्‍लाको साथ प्रशस्‍तै धन हुनुभन्‍दा थोरै धनसित परमप्रभुको भय राख्‍नु उत्तम हो। द्वेषले भरिएको ठाउँमा मोटो बाछो खानुभन्‍दा प्रेम भएको ठाउँमा सागपातसँग भोजन गर्नु उत्तम हो।
 “हाम्रा हातको शक्ति र बलले नै यो धन-सम्‍पत्ति हामीले कमायौं” भनी तिमीहरूले मनमा सोचौला। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वरलाई सम्‍झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन-सम्‍पत्ति प्राप्‍त गर्ने शक्ति दिनुहुन्‍छ। यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खाहरूसित बाँध्‍नुभएको करार स्‍थिर गर्नुहुन्‍छ, जो आजसम्‍म छँदैछ।
धनीको धन नै तिनीहरूका निम्‍ति बलियो सहर हो, तर दरिद्रताले असहायहरूको पतन हुन्‍छ।
 हे परमप्रभु, मेरो जीवनको अन्‍त देखाउनुहोस्‌। मेरो जीवनका अब कति दिन बाँकी छन्‌, र मेरो जीवन कति क्षणभङ्‌गुर छ भनी मलाई जान्‍न दिनुहोस्‌। तपाईंले मेरो जीवनकाल बित्ताभरको बनाउनुभएको छ, र मेरो आयु तपाईंको दृष्‍टिमा केही पनि होइन। मानिसको जीवन एक मुट्ठी सासमा मात्र अड़ेको छ। सेला मानिस छायाजस्‍तै मात्र हिँड्‌डुल गर्छ, त्‍यसले व्‍यर्थमा हलचल गर्दछ, त्‍यसले धन-सम्‍पत्ति थुपार्छ, तर त्‍यो बटुल्‍ने को हुन्‍छ, त्‍यसले जान्‍दैन।
 यदि तिमीले एउटा जिल्‍लामा गरीबहरूको अत्‍याचार भएको र तिनीहरूका न्‍याय र हक इन्‍कार भएको देख्‍यौ भने अचम्‍म नमान, किनभने हरेक अधिकारीमाथि अझ ठूलो अधिकारी खटाइएको हुन्‍छ, र तीभन्‍दा अझै ठूला अधिकारीहरूले तिनीहरूमाथि हेर-विचार गर्दछन्‌। जमिनबाट उब्‍जेका सबैले लिन्‍छन्, राजा स्‍वयम्‌ले खेतबाटै लाभ उठाउँछन्‌। जसले रुपियाँपैसाको माया गर्छ, त्‍यसलाई रुपियाँपैसाले कहिल्‍यै पुग्‍दैन। जसले धन-सम्‍पत्तिको माया गर्छ, त्‍यो आफ्‍नो आमदानीसँग कहिल्‍यै सन्‍तुष्‍ट हुँदैन। यो पनि व्‍यर्थ हो। जब धन-सम्‍पत्ति बढ्‌छ, तब खाने मुख पनि धेरै बढ्‌छ। अनि ती हेर्नुबाहेक मालिकलाई धन-सम्‍पत्तिको अरू के लाभ हुन्‍छ र? परिश्रम गर्नेको निद्रा मीठो हुन्‍छ, चाहे त्‍यसले थोरै खाओस्‌ अथवा धेरै, तर धनीको प्रचुर धनले गर्दा त्‍यसलाई निद्रै लाग्‍दैन। मैले सूर्यमुनि एउटा दु:खदायी खराबी देखेको छु। मालिकले आफ्‍नै नोक्‍सानीको निम्‍ति धन-सम्‍पत्ति थुपारेको, अथवा कुनै दुर्भाग्‍यले त्‍यसले आफ्‍नो धन-सम्‍पत्ति गुमाएको थियो, र जब त्‍यसको छोरा भयो उसको निम्‍ति केही रहेन। मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गै आउँछ, र जसरी आउँछ, त्‍यसरी नै त्‍यो फर्किजान्‍छ। त्‍यसले आफ्‍नो परिश्रमबाट आफ्‍नो हातमा लान सक्‍ने केही लैजाँदैन। यो पनि एउटा दु:खदायी खराबी हो। मानिस जसरी आउँछ, त्‍यसरी नै फर्किजान्‍छ। त्‍यसलाई के लाभ हुन्‍छ र? किनभने त्‍यसको परिश्रम हावामै खेर जान्‍छ। त्‍यसले आफ्‍नो सारा जीवनकाल ठूलो नैराश्‍य, कष्‍ट, रीसराग र अन्‍धकारमा बिताउँछ।
 किनकि सबैले देख्‍न सक्‍छन्‌ कि बुद्धिमान्‌ मानिस पनि मर्दारहेछन्‌, मूर्ख र विवेकहीन मानिसहरू पनि नष्‍ट हुन्‍छन्‌, र तिनीहरूले आफ्‍ना धन-सम्‍पत्ति अरूहरूका लागि छोड्‌छन्‌। तिनीहरूका चिहान सदाकाल तिनीहरूका घर हुन्‍छन्‌, पुस्‍तौँसम्‍म ती तिनीहरूका वासस्‍थान हुनेछन्‌, यद्यपि तिनीहरूले आफ्‍नै नाउँमा जमिनको नाउँ राखेका थिए। तर मानिस आफूसँग धन-सम्‍पत्ति भए पनि टिकिरहन सक्‍दैन, त्‍यो त नष्‍ट हुने पशुतुल्‍य छ। आफूमाथि भर पर्नेहरूको गति यस्‍तै हुन्‍छ, र तिनीहरूका कुरालाई समर्थन गरेर तिनीहरूका पछि लाग्‍नेहरूको गति पनि यस्‍तै हुन्‍छ। सेला तिनीहरूको अन्‍त्‍य भेड़ाको जस्‍तै चिहानमा हुन्‍छ, मृत्‍युले तिनीहरूलाई निल्‍नेछ। बिहानै सोझाहरूले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछन्‌, तिनीहरूका राजकीय महलदेखि टाढ़ामा तिनीहरूका देह चिहानमा कुहेर जानेछन्‌। तर परमेश्‍वरले मोल तिरेर मेरो प्राणलाई चिहानबाट छुटाउनुहुनेछ, उहाँले मलाई निश्‍चय नै ग्रहण गर्नुहुनेछ। सेला कोही धनी भयो र त्‍यसको घरको गौरव बढ़्यो भने तिमीहरू नडराओ। किनकि त्‍यो मर्दा त्‍यसले आफूसँग केही पनि लैजानेछैन, त्‍यसको गौरव त्‍यसको पछिपछि जानेछैन। त्‍यो बाँचुञ्‍जेल आफूलाई त्‍यसले धन्‍यको ठान्‍यो— कारण मानिसहरूले कोही मानिसको उन्‍नति हुँदा त्‍यसको प्रशंसा गर्छन्‌— तापनि त्‍यो आफ्‍नो पिता-पुर्खाको पुस्‍तामा मिल्‍न जानेछ, जसले फेरि कहिल्‍यै जीवनको ज्‍योति देख्‍नेछैनन्‌। समझशक्ति नभएको धनी मानिस नष्‍ट हुने पशुतुल्‍य हो।
“हेर यो मानिस, जसले परमेश्‍वरलाई आफ्‍नो आश्रय बनाएन, तर आफ्‍ना धन-सम्‍पत्तिको प्रशस्‍ततामा भरोसा राख्‍यो, र अरूलाई विनाश गरी बलियो भयो।”
जसले रुपियाँपैसाको माया गर्छ, त्‍यसलाई रुपियाँपैसाले कहिल्‍यै पुग्‍दैन। जसले धन-सम्‍पत्तिको माया गर्छ, त्‍यो आफ्‍नो आमदानीसँग कहिल्‍यै सन्‍तुष्‍ट हुँदैन। यो पनि व्‍यर्थ हो।
 परमेश्‍वरले सोलोमनलाई भन्‍नुभयो, “तेरो इच्‍छा यही भएको हुनाले, र तैंले धन-सम्‍पत्ति अथवा अधिकार वा मानमर्यादा वा आफ्‍ना शत्रुहरूको प्राण वा आफ्‍नो निम्‍ति दीर्घायु नमागेको तर मैले तँलाई राजा तुल्‍याएको यस प्रजामाथि शासन गर्ने बुद्धि र ज्ञान तैंले मागेको हुनाले, बुद्धि र ज्ञान तँलाई दिइनेछन्‌। अनि म तँलाई यस्‍तो धन-सम्‍पत्ति, अधिकार र मानमर्यादा पनि दिनेछु, जो तँभन्‍दा अघिका कुनै राजाले पाएका थिएनन्, अनि पछिका राजाले पनि पाउनेछैनन्‌।”
 यसकारण परमेश्‍वरले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तैंले यो कुरा मागेकोले, र तैंले आफ्‍नो निम्‍ति लामो आयु अथवा धन-सम्‍पत्ति वा तेरा शत्रुहरूको प्राण नमागेको, तर ठीकसित न्‍यायको निधो गर्नलाई बुद्धि मागेको कारणले, तैंले मागेको म पूरा गर्नेछु। म तँलाई बुद्धिमान्‌ र निधो गर्न सक्‍ने मन दिनेछु, कि तेरो अघि तँजस्‍तो कहिले कोही भएको छैन, न तेरो पछि कहिल्‍यै अरू कोही हुनेछ। यसबाहेक तैंले नमागेका ती कुराहरू, अर्थात्‌ धन-सम्‍पत्ति र मान पनि म तँलाई दिनेछु, यहाँसम्‍म कि तेरो जीवनकालमा राजाहरूमध्‍ये कुनै पनि तेरो बराबरी हुनेछैन।
अति नै ब्‍याज लगाएर जसले आफ्‍नो सम्‍पत्ति बढ़ाउँछ, त्‍यसले कुम्‍ल्‍याएको धन अर्कैको हुनेछ, जसले गरीबमाथि दया राख्‍नेछ।
 परमप्रभुको प्रशंसा गर। त्‍यो मानिस धन्‍यको हो, जसले परमप्रभुको भय मान्‍दछ, र उहाँका आज्ञाहरूमा ज्‍यादै प्रसन्‍न हुन्‍छ। त्‍यसको वंश देशमा शक्तिशाली हुनेछ, सोझा मानिसहरूको पुस्‍ताले आशिष्‌ पाउनेछ। त्‍यसको घरमा धन-सम्‍पत्ति रहन्‍छ, र त्‍यसको धार्मिकता सदा रहिरहन्‍छ।
देशमा गरीब सधैँ हुनेछन्‌। यसकारण म तिमीहरूलाई आज्ञा दिँदैछु, आफ्‍ना भाइबन्‍धु र आफ्‍नो देशमा भएका गरीब र दरिद्र हुनेहरूलाई उदार-चित्तले दिनू।
प्रत्‍येक हप्‍ताको पहिलो दिन तिमीहरू हरेकले आ-आफ्‍नो कमाइअनुसार केही धन छुट्ट्याएर जम्‍मा गर्दै राख्‍नू, ताकि म आउँदा भेटी संग्रह गर्नु नपरोस्‌।
तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएको परमेश्‍वरका बगालको हेरचाह गर। करले होइन तर स्‍वेच्‍छाले, धनको लोभले होइन तर उत्‍साहसाथ,
 “एक जना धनी मानिस थियो, जो बहुमूल्‍य वस्‍त्र र मिहीन मलमल लगाएर दिनहुँ मोजमज्‍जामा बस्‍तथ्‍यो। उसको ढोकामा लाजरस नाउँको एक जना गरीब मानिसलाई ल्‍याएर राखिदिन्‍थे। त्‍यो घावैघाउले भरिएको थियो। त्‍यस धनी मानिसको टेबिलबाट झरेका टुक्राटाक्री खाएर लाजरसले आफ्‍नो पेट भर्ने इच्‍छा गर्थ्‍यो। कुकुरहरूले पनि आएर त्‍यसका घाउहरू चाट्‌थे। “त्‍यो गरीब मानिस मर्‍यो, र स्‍वर्गदूतहरूले त्‍यसलाई लगेर अब्राहामको साथमा राखे। त्‍यो धनी मानिस पनि मर्‍यो र गाडियो। नरकमा कठोर कष्‍ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्‍यो र टाढ़ामा अब्राहाम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्‍यो। अनि उसले कराएर भन्‍यो, ‘हे पिता अब्राहाम, ममाथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस्, र त्‍यसले आफ्‍नो औँलाको टुप्‍पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदेओस्, किनकि म यस ज्‍वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेछु।’ “तर अब्राहामले भने, ‘छोरो, याद गर्, तैंले आफ्‍नो जीवनकालमा असल-असल कुराहरू भोग गरिस्, र त्‍यसै गरी लाजरसले दुःखैदुःख भोग्‍यो। त्‍यो अब यहाँ आराममा छ, र तँचाहिँ कष्‍टमा छस्‌। यी सबै कुराबाहेक यहाँबाट तँकहाँ पारि जान खोज्‍नेहरू जान नसकून्‌ र त्‍यहाँबाट यहाँ हामीकहाँ वारि आउन पनि नसकून्‌ भनेर हामीहरू र तिमीहरूका बीचमा एउटा अति गहिरो धाँदो छ।’ “उसले भन्‍यो, ‘पिता, यसैकारण म तपाईंलाई बिन्‍ती गर्दछु, तपाईंले त्‍यसलाई मेरा बाबुको घरमा पठाइदिनुहोस्, किनभने मेरा पाँच भाइ छन्, र त्‍यसले तिनीहरूलाई चेताउनी देओस्, नत्रता तिनीहरू पनि यस कष्‍टको ठाउँमा आउलान्‌।’ “तर अब्राहामले भने, ‘तिनीहरूका साथमा मोशा र अगमवक्ताहरूका पुस्‍तक छन्‌। तिनीहरूले ती सुनून्‌।’ “तर उसले भन्‍यो, ‘होइन, पिता अब्राहाम, मरेकाबाट कोही एक जना तिनीहरूकहाँ गयो भनेता तिनीहरूले पश्‍चात्ताप गर्नेछन्‌।’ “उनले उसलाई भने, ‘मोशा र अगमवक्ताहरूका कुरा तिनीहरूले सुन्‍दैनन्‌ भने, मृतकहरूबाट कोही जीवित भए पनि तिनीहरूले विश्‍वास गर्नेछैनन्‌’।”
तब उहाँले आफ्‍ना चेलाहरूमाथि नजर उचालेर भन्‍नुभयो: “धन्‍य तिमी, दीन हुनेहरू, किनभने परमेश्‍वरको राज्‍य तिमीहरूकै हो।
धनीले गरीबमाथि प्रभुत्‍व जमाउँछ, र ऋण लिनेचाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्‍छ।
 “आफ्‍नो निम्‍ति पृथ्‍वीमा धन-सम्‍पत्ति नथुपार, जहाँ कीरा र खियाले ती नष्‍ट पार्छन्‌ र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोर्छन्‌। तर आफ्‍नो निम्‍ति स्‍वर्गमा धन-सम्‍पत्ति थुपार, जहाँ कीराले वा खियाले नष्‍ट पार्दैन, र चोरले पनि चोर्दैन। किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्‍छ, त्‍यहीँ तिम्रो मन पनि हुन्‍छ।